तपाईंको LinkedIn प्रोफाइल फोटो कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ? | Martech Zone
मङ्गलबार, जनवरी 11, 2022 मङ्गलबार, जनवरी 11, 2022 Douglas Karr
धेरै वर्ष पहिले, म एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएको थिएँ र तिनीहरूसँग एक स्वचालित स्टेशन थियो जहाँ तपाईं पोज गर्न र केही हेडशटहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नतिजाहरू आश्चर्यजनक थिए... क्यामेरा पछाडिको बुद्धिमत्ताले तपाईंले आफ्नो टाउकोलाई लक्ष्यमा राख्नुभएको थियो, त्यसपछि प्रकाश स्वतः समायोजन भयो, र बूम... फोटोहरू खिचियो। मलाई डाङ सुपरमोडल जस्तो लाग्यो कि तिनीहरू धेरै राम्रो बाहिर आए... र मैले तिनीहरूलाई तुरुन्तै प्रत्येक प्रोफाइलमा अपलोड गरें।
तर यो थिएन साँच्चै म म सुपर मोडल होइन। म एक रमाइलो, शरारती, र खुसी मोटा केटा हुँ जसले हाँस्न, हाँस्न र अरूबाट सिक्न मन पराउँछ। केही महिना बित्यो र म मेरी छोरी र एउटी महिलासँग खाना खाइरहेको थिएँ जसलाई मलाई थाहा थियो हामीसँग कुराकानी गर्न बसे। मेरी छोरी ... जसले कुनै पनि परिस्थितिलाई फोटोग्राफ नगरी जान दिन सक्दैन ... बिचमा हाँसेको हाम्रो फोटो खिच्यो।
मलाई यो फोटो मन पर्छ। मलाई कपाल काट्न आवश्यक थियो, पृष्ठभूमि न्यानो काठको थियो, प्रकाशले स्वागत गरिरहेको थियो, र मैले सादा बरगन्डी टी-शर्ट लगाएको छु.. कुनै सूट वा टाई छैन। यो तस्बिर is म एक पटक म घर पुगेपछि, मैले यसलाई काटें र यसलाई मेरो मा राखें LinkedIn प्रोफाइल।
LinkedIn मा डगलससँग हेर्नुहोस् र जडान गर्नुहोस्
अवश्य पनि, म LinkedIn मा एक कर्मचारी मात्र होइन। म एक वक्ता, एक लेखक, एक सल्लाहकार, र एक व्यापार मालिक हुँ। मैले लिङ्क्डइनमा सम्भावित साझेदार, क्लाइन्ट, वा कर्मचारीसँग जडान नगरेको एक हप्ता पनि बित्दैन। तपाईको प्रोफाइल फोटो कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर म पक्कै पनि पर्याप्त तनाव दिन सक्दिन। हामी भेट्नु अघि, म तिमीलाई हेर्न चाहन्छु, तिम्रो मुस्कान हेर्न चाहन्छु, र तिम्रो आँखामा हेर्न चाहन्छु। म महसुस गर्न चाहन्छु कि तपाईं मिलनसार, व्यावसायिक, र जडान गर्न एक महान व्यक्ति हुनुहुन्छ।
के म त्यो फोटोबाट पाउन सक्छु? यो सबै होइन ... तर म पहिलो प्रभाव प्राप्त गर्न सक्छु!
के लिंक्डइन तस्विरले तपाइँको भाडा योग्यतालाई असर गर्छ?
एडम ग्रुसेला मा Passport-Photo.online यस इन्फोग्राफिकमा समर्थन तथ्याङ्कहरूको साथ केही उत्कृष्ट सल्लाहको साथ यो मुख्य प्रश्नको जवाफ दिनुभयो। इन्फोग्राफिकले LinkedIn प्रोफाइल फोटोका केही महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई छुन्छ... शीर्ष विशेषताहरू सहित:
करिश्मा - आगन्तुकलाई मन पराउनुहोस् र तपाईलाई विश्वास गर्नुहोस्।
व्यावसायिकता - तपाईंको आलामा तस्विर समायोजन गर्नुहोस्।
गुणस्तर - राम्रोसँग खिचेका फोटोहरू मात्र अपलोड गर्नुहोस्।
व्यक्तित्व - तिनीहरूलाई राम्रोसँग चिन्नुहोस्।
तिनीहरूले केही सुझावहरू प्रदान गर्छन् - जस्तै एक पेशेवर फोटोग्राफरलाई काममा लिने, उच्च गुणस्तरको छवि प्रयोग गरेर, यो व्यावसायिक छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्, उत्कृष्ट मुद्रा प्रयोग गर्नुहोस् र आफ्नो करिश्मा देखाउनुहोस्। तिनीहरूले केही रातो झण्डाहरू पनि प्रदान गर्छन्:
आंशिक रूपमा देखिने अनुहार प्रयोग नगर्नुहोस्।
कम रिजोल्युसनको फोटो प्रयोग नगर्नुहोस्।
छुट्टीको फोटो प्रयोग नगर्नुहोस्।
प्रमाणिक नभएको छवि प्रयोग नगर्नुहोस्।
व्यक्तिगत फोटोमा कम्पनीको फोटो प्रयोग नगर्नुहोस्।
अनौपचारिक हुनुमा ओभर-द-टप नगर्नुहोस्।
मुस्कान बिना फोटो प्रयोग नगर्नुहोस्!
इन्फोग्राफिकले तपाइँलाई तपाइँको तस्बिर नै सबै कुरा होइन भनेर थाहा दिन्छ... तपाइँको सम्पूर्ण LinkedIn प्रोफाइललाई अप्टिमाइज गर्नु तपाइँको जडान गर्न र भाडामा लिने क्षमता बढाउनको लागि महत्वपूर्ण छ। यो सहित हाम्रा अन्य लेखहरू र सँगै इन्फोग्राफिक्स पढ्न निश्चित हुनुहोस् तपाइँको LinkedIn प्रोफाइल अनुकूलन मा विस्तृत गाइड, साथै यी अतिरिक्त LinkedIn प्रोफाइल सुझावहरू.
तर मलाई फोटो खिच्न मन लाग्दैन
मैले बुझें तर तिम्रो प्रोफाइल फोटो हो छैन तिम्रो लागि! यदि तपाइँ आफ्नो फोटोहरू प्राप्त गर्न र प्रयोग गर्न घृणा गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ विश्वास गर्ने राम्रो साथीलाई सोध्नुहोस्। तपाईलाई बाहिर लैजाने, केहि दर्जन शटहरू लिने, र त्यसपछि तपाइँको विश्वसनीय साथीलाई प्रयोग गर्न फोटो चयन गर्न दिनुहोस् जस्तो केहि छैन। तिनीहरूले तपाईंलाई चिन्छन्! उनीहरूलाई थाहा हुनेछ कि कुनले वास्तवमै तपाइँको प्रतिनिधित्व गर्न उत्कृष्ट काम गर्दछ।
टैग: douglas karrइंफोग्राफ़कLinkedInलिङ्क गरिएको हेडशटलिङ्क गरिएको फोटोग्राफीलिin्कडिन तस्वीरलिंक गरिएको प्रोफाइलफोटोग्राफीप्रोफाइल फोटोप्रोफाइल फोटो टिप्स